दुबईमा हुनुहुन्छ ? आयो यस्तो सूचना – Tufan Media News
दुबईमा हुनुहुन्छ ? आयो यस्तो सूचना
१९ भाद्र २०७८, शनिबार ०९:१३
काठमाण्डौ – आउँदो आइतबार अर्थात सेप्टेम्बर ५ देखि कोरोना विरुद्धको पूरा खो’प लगाएर यूएईको आबुधाबी जाने यात्रुले क्वरेण्टीन बस्न नपर्ने भएको छ ।
आफ्नो नीतिलाई परिवर्तन गर्दै यूएईको इमर्जेन्सी, क्राइसिस एण्ड डिजास्टर कमिटीले खोप लगाएर आएका यात्रुले क्वरेण्टीन बस्न नपर्ने नियम ल्याएको हो । यो नियम अन्तर्राष्ट्रिय उडान मार्फत आउने सबै यात्रुका लागि लागू हुने खबर गल्फ न्युजले लेखेको छ ।
खो’प लगाएका र यूएईले ग्रिन लिष्टमा राखेका देशबाट आउने यात्रुले प्रस्थानभन्दा ४८ घण्टा अगाडिको पीसीआर नेगे’टिभ रिपोर्ट देखाउन पर्छ । यस्तै आबुधाबी पुग्नासाथ पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ भने त्यहाँ पुगेको ६ दिनपछि पुनः पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ ।
ग्रिन लिष्ट भन्दा अन्य देशबाट आउने यात्रुले पनि प्रस्थानभन्दा ४८ घण्टा अगाडिको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउन पर्छ । आबुधाबी पुगेपछि पीसीआर परीक्षण हुने छ भने त्यसपछि त्यहाँ पुगेको चौथो र आठौं दिनमा पनि पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ ।
यस्तै कोरोना वि’रुद्धको खोप नलगाएका तर ग्रिन लिष्ट देशबाट गएकाहरुले पनि प्रस्थानभन्दा ४८ घण्टा अगाडिको पीसीआर नेगेटिभ रिपो’र्ट देखाउन पर्छ । आबुधाबी पुगेपछि पनि पीसीआर परीक्षण गर्नपर्छ । तर क्वरेण्टीनमा बस्न पर्दैन । त्यसपछि ६ दिनमा र ९ दिनमा पुन ः पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ ।
तर खो’प नलगाएका रेडलिष्ट देशबाट आएका यात्रुले भने प्रस्थानभन्दा ४८ घण्टा अगाडिको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्टका साथै आबुधाबी पुगेपछि १० दिन क्वरेण्टीनमा बस्न पर्छ । ९ दिनको दिनमा पीसीआर परीक्षण हुनेछ ।